AUNG PYI SONE AYE (Buddhism) အောင်ပြည့်စုံအေး: ဘယ်သွားကြမလဲတရားတော် ( ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး)
အဓိသီလအားကောင်းလျှင် စိတ်တွေသောင်းကျန်းမှုမရှိဘဲ၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားပြီးတည် နေတော.တယ်။အဲဒါ အဓိစိတ်တလို.ခေါ်တယ်။ အဓိစိတ်တအားကောင်းလို.အချိန်ကြာလျှင် ဘယ်လူ၊ဘယ်နတ်၊ဘယ်ဗြဟ္မာမှ ဖန်တီးလို.မဖြစ်ဘူး၊လျှပ်တပြက်အတွင်း ကုဋေတသိန်း ဖြစ်ပြီးပျက် နေတယ်။ရုပ်နာမ်ကိုသိလျှင် ဖြစ်ပျက်ကို သိတော.တာပဲ။ ဖြစ်ပျက်ကိုသိတာ အဓိပညာလို.ခေါ် တယ်။ အများနားလည်အောင်ပြောရမယ် ဆိုလျှင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထင်ရှားတဲ. အစိတ်အပိုင်း တခုဖြစ်တဲ. နှာဖျား နှာဝမှာ ထွက်လေ၊၀င်လေ နှစ်ရပ်ဟာ အမြဲတိုက်ဝင်၊ တိုက်ထွက်နေတယ်။နှာဖျား နှာဝမှာ ကာယပသာဒ အကြည်က အထိခံ၊ ထွက်လေ၀င်လေဖြစ်သော ဖြစ်တဲ. လေနှစ်ရပ်ဟာ ၀ါယော ဖောဋ္ဌဗကထိတယ်။ ထိုအထိခံနဲ. ထိတာကရုပ်၊ သိတာကနာမ် ဆိုတော. ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို. သူများမေးမနေနဲ.၊ ကိုယ်.နှာဝကိုဥာဏ်နဲ.စောင်.ကြည်.။၀င်တော.ထိဝင်မယ်၊ထွက်တော့လည်းထိထွက်မယ်၊ထိတာကိုသိလျှင် သိနေလျှင် လောဘ၊ ဒေါသ၊မောဟ ဖြစ်ခွင်မရလို့လောဘမီး၊ ဒေါသမီး၊မောဟမီး၊ ငြိမ်းတယ်၊ ငြိမ်းတော. အေးတယ်။ မထိခင်ကလဲသိလိုမဖြစ်ဘူး၊ ထိပြီးပြန်တော.လဲသိလို့မဖြစ်ဘူး။ထိတုန်းကိုသာလို.ဖြစ်တယ်။အဲံဒါကိုပုစ်စုပ်ပန်တဲ.တဲ.လိုဆိုတယ်။ ထိတာကိုသိနေလျှင် ရုပ်နှင်.နာမ်သာ ရှိပါသလား လို.သိလိမ်.မယ်။ ရုပ်နာမ်မှတပါး ငါ-သူတစ်ပါး ယောက်ျား၊မိန်းမ မရှိဘူး ဆိုတာ ဘုရားရှင်၏တရားတော် အမှန်ပါကလား လို. ကိုယ်ဟာကိုယ်သိလိမ်.မယ်။သူများကိုမေးနေဖို. မလိုပါဘူး။ နှာဖျားနှာဝမှာ လေထိတာကို သိနေလျှင် ထိုအချိန်မှာအတ္တ ဆိုတဲ. ကိုယ် မရှိဘူး။ ထိုသိနေတဲ.အချိန်မှာ ဥာဏ်အမြင် စင်ကြယ်တယ်။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တယ်၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရတာ များ ဘာမှလဲ မတွေ.ပေါင်၊ ဘာမှလည်းမရပေါင် လို.များမမှတ်လိုက်ကြနဲ.၊ မြင်.မြတ်တဲ.ဘ၀ ဘုရားသာသနာနဲ. ကြုံကြိုက်တဲ.အခါမှာ ဒီလိုအကျိုးထူးများရနိုင်တယ်၊ စာဖို.သောက်ဖို.အသာထားပြီးအထူးကြိုးစားကြ။
မေး။ သူများကိုကောငါဘာနဲ.နေ တာလဲ။၀ိဇ္ဇာနဲ. လား။ အ၀ိဇ္ဇာနဲ.လားလို. မေးရဦးမှာလား။
Posted by Aung Pyi Sone Aye at 9:35 PM